Muxuu leeyahay heshiiska caalamiga ah ee dumarku? | sowora
Mother of stowaway teen says she wants to reunited with her children →
Heshiiska caalamiga ah ee joojinta cunsuriyeynta dumarka noocii ay doonto ha ahaatee waxaa badanaa loogu yeeraa heshiiska caalamiga ah ee dumarka. kaasna waxaa qaatay QM(Qaramada midoobay), wuxuuna leeyahay dumarka waxay si sax ah ugu xuquuq yihiin ragga. Qaybo badan oo dunida ka mid ah dumarka waa la duudsiiyaa xuquuqdooda.
Waxay leeyihiin awood ka yar midda ragga, mana haystaan fursado la mid ah kuwa ragga tusaale ahaan sida waxbarashada ama in ay si xor ah u go’aansadaan noloshooda. Sidaas darteed ayaa loo baahan yahay xeerar si bayyaan ah u oranaya dumarku waxay ku xuquuq yihiin ragga lamana cunsuriyeyn karo. Halkaaan waxaad ka akhrisan kartaa dhawr ka mid qodobada heshiiska caalamiga ah ee dumarka.
Gabdhuhu waa in ay helaan xuquuqda iyo xornimada ragga oo kale dhinac kasta oo nolosha. Waxay noqon kartaa in ay gabdhuhu xaq u helaan in ay siyaasadda uga qayb qaataan sida wiilasha oo kale, in ay yeeshaan saaxiibo, ay lacag shaqaystaan ayna dhaqaalahooda ayagu ka taliyaan.
Gabdhaha waa in aan loo arkin in ay ka daciifsan yihiin wiilasha oo aan laga haysan aragti xun iyo dhaqan ku dhisan fikrado noocaas ah.
Gabdhuhu waa in ay helaan xuquuq la mid midda wiilasha oo ay si madax bannaan u dooran karaan haddii ay rabaan in ay guursadaan iyo ciddii ay guursanayaan. Gabdhuhu waa in ay helaan xuquuq la mid ah wiilasha, oo ay ayagu go’aansadaan haddii ay rabaan in ay carruur dhalaan, oo haddii ay saas tahayna inta carruur ah oo ay rabaan. Gabdhuhu waxay kaloo ku xuquuq yihiin wiilasha markii ay noqoto waxa ay doonayaan in ay ka shaqeeyaan.